ဟေလီယိုစဖီးယား - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိပ်: ကြယ်တာရာကြားခံနယ်သို့ဖြတ်သန်းသွားသော ဟေလီယိုစဖီးယား၏ဇယား:
Heliopause-နေမုန်တိုင်းနှင့် ကြယ်တာရာခံမုန်တိုင်းတို့ ဆုံရာနယ်နိမိတ်
အလယ်: water running intoasink as an analogy for the heliosphere and its different zones (left) and Voyager measuringadrop of the solar wind's high-energy particles at the termination shock (right)
အောက်: နေအဖွဲ့အစည်း ၏ အရွယ်အစားနှင့် ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ ၏ တည်နေရာ။ Gliese 445 သည် နေမှ ဗွိုင်ယေဂျာအကွာအဝေးထက် အဆပေါင်း ၁၀၀၀၀ နီးပါးကွာဝေးသည်။
ဟေလီယိုစဖီးယား ဟူသည် နေ၏ မဂ္ဂနက်တိုစဖီးယားအလွှာ၊ အာစထရိုစဖီးယားအလွှာနှင့် အပြင်ဘက်အကျဆုံးအလွှာဖြစ်သည်။ ဟေလီယိုစဖီးယားအလွှာ၏ နေ၏ သံလိုက်စက်ကွင်းများသဖွယ်ပြုမူပြီး နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီမှ ရောက်လာသော ကော့မစ်ရောင်ခြည်များ၊ ဂါမာရောင်ခြည်ကဲ့သို့သော အန္တရာယ်ရှိသည့်ရောင်ခြည်များကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ဟေလီယိုစဖီးယားဟူသောအမည်ကို Alexander J. Dessler ဆိုသူက ၁၉၆၇ ခုနှစ် သိပ္ပံစာပေတွင် ပထမဆုံးအသုံးပြုခဲ့သောကြောင့် ခေါ်ဆိုသည့်အမည်ဖြစ်သည်။ ဟေလီယိုစဖီးယားကိုလေ့လာသည့် သိပ္ပံလေ့လာမှုကို ဟေလီယိုရူပဗေဒဟုခေါ်ဆိုပြီး အာကာသရာသီဥတုတို့ ပါဝင်သည်။
ဗွိုင်ယေဂျာအာကာသယာဉ် ၂ စင်းသည် termination shock နှင့် heliosheath ကိုကျော်ဖြတ်ကာ ဟေလီယိုစဖီးယားအပြင်ဘက်သို့ စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ ၁ သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်တွင် heliopause သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပလာဆမာ သိပ်သည်းဆ ရုတ်တရက် ၄၄ ဆ များလာသည်ကို ခြေရာခံမိသည်။ ဗွိုင်ယေဂျာ ၂ သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်တွင် heliopause ကို ဖြတ်သန်းခဲ့သည်။ heliopause သည် နေစကြဝဠာနှင့် အခြားဂယ်လက်ဆီများ၏ နယ်နိမိတ်ဖြစ်သောကြောင့် ဟေလီယိုစဖီးယားမှထွက်ခွာသွားသည့် ယင်းအာကာသယာဉ် ၂ စင်းသည် ကြယ်တာကြားခံ အာကာသယာဉ်များအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ကြသည်။
Heliosphere (နေနယ်မြေ)၏ အပြင်ဘက်တည်ဆောက်ပုံအား နေမုန်တိုင်းများနှင့် ကြယ်ကြားအာကာသတွင် တိုက်ခတ်နေသော ကြယ်မုန်တိုင်းတို့၏ အပြန်အလှန်သက်ရောက်နေမှုက အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်။ နေမုန်တိုင်းများသည် နေမှအဘက်ဘက်သို့ တစ်စက္ကန့်လျှင် ကီလိုမီတာရာပေါင်းများစွာမြန်နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်နေကြသည်။ အကွာအဝေးတစ်ခုအရောက်တွင်၊ နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်အား အတော်ဝေးဝေး ကျော်ပြီးနောက်တွင် ကြယ်ကြားနယ်မြေမှ ဓာတ်ငွေ့များနှင့်တွေ့ပြီး နေမုန်တိုင်းအားနည်းလာသည်။ အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းဖြစ်ပွားသည်။
နေမုန်တိုင်းများသည် အသံထက်မြန်သောနှုန်းဖြင့် နေစကြာဝဠာအတွင်းတွင်လှည့်ပတ်နေသည်။
↑ Alexander J. Dessler (February 1967). "Solar wind and interplanetary magnetic field". Reviews of Geophysics and Space Physics5(1): 1–41. doi:10.1029/RG005i001p00001. Bibcode: 1967RvGSP...5....1D.
↑ NASA Spacecraft Embarks on Historic Journey Into Interstellar Space (12 September 2013)။
↑ NASA's Voyager2Probe Enters Interstellar Space (10 December 2018)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟေလီယိုစဖီးယား&oldid=705800" မှ ရယူရန်